‘हो, मैले डोनाल्ड ट्रम्पसँग यौनसम्पर्क गरेकी थिएँ’ – पोर्नस्टार स्टोर्मी डानियल — ckhabar.com
‘हो, मैले डोनाल्ड ट्रम्पसँग यौनसम्पर्क गरेकी थिएँ’ – पोर्नस्टार स्टोर्मी डानियल
जनवरी २०१८ मा वाल स्ट्रिट जर्नलले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका वकिल माइकल कोहेनले पोर्नस्टार स्टोर्मी डानियल्सलाई १,३०,००० अमेरिकी डलर तिरेको समाचार छाप्यो । कोहेनले सो पैसा ट्रम्पको तर्फबाट राष्ट्रपति निर्वाचनको एक दुई दिन वरपर तिरेका थिए । यो पैसा वकिलले स्टोर्मीलाई उनी र ट्रम्पबीच सन् २००६ तिर एक वर्ष चलेको सम्बन्धबारे सार्वजनिक रूपमा नबोल्न कानुनी बन्देज रहने गरी तिरेका थिए ।
यो खबर सार्वजनिक भएपछि आई.टी. टचले सन् २०११ मा स्टोर्मीसँग गरेको अन्तरवार्ताको पूर्ण पाठ आफ्नो अनलाइनमा राख्यो । अन्तरवार्तामा स्टोर्मीले ट्रम्ससँग सन् २००६ मा एक वर्ष चलेको सम्बन्धबारे बालेकी छिन् । अन्तरवार्ता दिनुअघि स्टोर्मीले पोलिग्राफिक टेस्ट दिएकी थिइन् । पोलिग्राफ टेस्टमा स्टोर्मीलाई सम्बन्धको विभिध पक्षमा प्रश्न सोधिएको थियो । टेस्टमा उनले बोलेको कुरा साँचो देखाएको थियो ।
तल सोही अन्तरवार्ताको पूर्ण पाठ प्रस्तुत गरिएको छ ।
आई.टी. : डोनाल्ड ट्रम्पलाई पहिलो पटक कहिले भेट्नुभयो ?
स्ट्रोमी : लेक तहोईमा च्यारिटीका लागि गरिएको गल्फ प्रतियोगितामा भेटेकी थिएँ । मलाई लाग्छ उनी त्यहाँ गल्फ खेल्न आएका थिए । मैले काम गर्ने कम्पनीले गिफ्ट रूममा सहभागिता जनाएको थियो, त्यसैले म गएको थिएँ । पहिलो पटक मैले उनलाई गल्फ कोर्समा भेटेकी थिएँ । तिनले हामीलाई वरपर घुमाइरहेका थिए । त्यसक्रममा उनले मलाई हेरिरहेका थिए र त्यहीँ हामीलाई परिचय गराइयो । उनलाई सबैमाझ परिचय गराइयो । पछि पनि उनी मलाई हेरिरहेका थिए । पछि हामी एउटै गाडीमा अर्को ‘होल’सम्म गयौँ । सो क्रममा उनले ‘म तपाईसँग पछि कुरा गर्न चाहन्छु’ भने । पछि उनी गिफ्ट रूममा आउँदा उनले मलाई भेटे । त्यो बेलाउनले मसँग आफ्नो नम्बर मागे र मैले दिएँ । त्यसपछि उनले मलाई त्यो रात डिनर खान चाहनुहुन्छ भनेर सोधे । मैले ‘निश्चय नै हुन्छ’ भने । कसले यस्तो रोचक मानिससँग गफ गर्ने अवसर गुमाउन चाहन्छ ? मैले उनीसँग डेट गर्ने वा अरू केही गर्ने सोचेकी थिइनँ ।
आई.टी. : तपाईंका तर्फबाट यो एक व्यापारिक कदम थियो ?
स्ट्रोमी : निश्चय नै । तपाईं उनको प्रशंसक भए पनि नभए पनि उनी निक्कै रोचक मान्छे हुन भने स्वीकार्नुपर्छ । मेरो पेसाको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको म निक्कै रोचक र अजिबका मानिससँग भेट्ने मौका पाउँछु । उनले मलाई निमन्त्रणा दिए । उनले मलाई उनको कोठामा आउन भने । उनले मलाई आफ्नो कोठा नम्बर भने । अहिले मलाई त्यो कोठा नम्बर त सम्झना छैन तर त्यो होटेल हराहको सबैभन्दा माथिल्लो तल्ला थियो ।
आई.टी. : त्यसपछि के भयो ?
स्टोर्मी : म त्यहाँ गएँ । कोठा बाहिर उनको अङ्गरक्षक किथ थिए । पछि पनि उनीसँग भेट्न जाँदा प्रत्येक पटक उनलाई देख्थेँ । किथ सधैँ उनीसँग हुन्थे । मैले कहिले पनि डोनाल्ड ट्रम्पको नम्बर पाइनँ । म सधैँ किथको नम्बरमा फाने गर्थें ।
म उनको कोठामा गएँ । त्यसपछि किथले ‘ए आउनुभयो, उहाँले तपाईंलाई भित्र पर्खिरहेका छन् ।’ भने । म भित्र गएँ । म सजिएर आएकी थिएँ किनकि मलाई डिनरका लागि बाहिर जाने होला भन्ने लागेको थियो । तर उनी भने कोठामै खाना खाने सोचिरहेका रहेछन् । उनी त सामान्य पोसाकमा थिए । मैले उनलाई यस विषयमा ठट्टा गरेको याद छ । मैले यो किन सम्झिरहेकी छु भने म कोठामा पस्दा उनी सोफामा पल्टेर टिभी हेरिएका थिए । उनी पाइजामामा थिए र मैले उनलाई भने ‘हाहा के हेफ्नरलाई (प्लेब्याई पत्रिकाका संस्थापक) तपाईंले उनको पहिरन चोरेको थाहा छ ?’ खासमा म उनीसँग निक्कै रुखो रूपमा प्रस्तुत भएकी थिएँ । त्यसपछि उनले परिस्थितिलाई हल्का बनाउन भनँे– ‘ए, मैले त यहीँ आरामसँग बसेर खाऔं भनेको,’ भने । अन्त्यमा हामीले उनकै कोठामा डिनर खायौँ । हामीले के मगाएको थियौँ, त्यो त सम्झँदिनँ तर हामीमध्ये कसैले पनि रक्सी भने खाएका थिएनौं । कामको समयमा म रक्सी खादिनँ । खासमा म धेरै रक्सी खादिनँ । रक्सीको विज्ञापनका लागि फोटो खिचाउँदा पनि मेरो हातमा भएको गिलासमा ‘रेड बुल’ हुनेगर्छ । उनले पनि रक्सी लिएका थिएनन् । मैले कहिले पनि उनले पिएको देखिनँ । सायद उनी पिउँदैनन् होला । हामी केही समय गफियौं । उनले मेरो व्यवसायको बारेमा धेरै प्रश्नहरू सोधे । सबै प्राविधिक प्रश्न थिए । उनी निक्कै जिज्ञासु थिए । प्रश्नहरू यौनसम्बन्धी होइनन् अरू नै थिए । उनले यो क्रममा पटक पटक उनको फोटो आवरणमा भएको म्यागजिन देखाए । त्यो कुनै कर्पोरेटसम्बन्धी म्यागजिन थियो । अहिले त्यसको नाम सम्झन सकिनँ । तर यो उनको कोठामा थियो र उनले मलाई पटक पटक त्यो देखाइरहे । मलाई भने ‘यार म तिमी को हौ चिन्छु’ भन्ने खालको सोच आइरहेको थियो । मलाई लाग्छ, उनी मलाई प्रभावित बनाउन खोजिरहेका थिए । हाम्रो पहिलो भेटमा अझ त्यो भेटको सुरुवाती केही घण्टा उनले मलाई प्रभावित पार्न खोजेको झैं लागेको थियो । उनले मलाई त्यो म्यागजिन देखाएर ‘यहाँ हेर त, यसमा म राम्रो देखिएको छुइनँ त ?’
आई.टी. : तपाईंहरूले खाउन्जेल यति मात्र कुरा भयो त ?
स्टोर्मी : हो, कम्तीमा केही घण्टासम्म यही कुरा भयो । मलाई सम्झना भएसम्म म त्यहाँ पुग्दा उज्यालै थियो, साँझ साँझको समय थियो । मलाई मेरो होटेलबाट उनको होटेलसम्म हिँडेर गएको याद छ ।
आई.टी. : यो तपाईहरू भेट भएको पहिलो दिन नै भएको थियो ?
स्टोर्मी : हो, म त्यहाँबाट निस्कँदा अन्धकार भइसकेको थियो ।
आई.टी. : त्यो अवधिभरी कोठामा तपाईं दुई मात्र हुनुहुन्थ्यो ? अनि अङ्गरक्षक बाहिर उभिएका थिए ?
स्टोर्मी : हो, त्यो अवधीभर कोही पनि भित्र आएनन् । अङ्गरक्षक किथ बाहिर उभिरहेका थिए । हामी अनेक विषयमा कुरा गरिरहेका थियौं । म उनले सोधेको सम्झन्छु ‘तिमीलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, नरिसाउ है ?’ सोधे । मैले सोध्न भने । मैले अश्लील खालको प्रश्नको आशा गरेको थिएँ तर त्यो त्यस्तो थिएन : त्यो मैले कुनै चीजबाट मैले रोयल्टी बापत कति पाउँछु भन्ने थियो । मैले पनि उनलाई पछि भने ‘म पनि तिमीलाई एउटा प्रश्न सोध्छु तर यसले चाहीँ रिस उठ्नेछ ।’ मैले उनको कपालबारे प्रश्न सोधें, ‘यार यो कि यस्तो छ ?’ र उनी हाँसे र भने ‘तिमीलाई थाहा छ, सबै मेरो कपालबारे चाख दिन्छन् र यसका लागि विभिन्न सुझाव दिन्छन् ।’ त्यसपछि मैले भने ‘तिमी चाहिँ यसमा केही बदलाब गर्न चाहँदैनौ ?’ उनले आफूले कपाल काटेमा आफ्नो पैसा र शक्ति गुमाउँछु जस्तो लाग्ने बताए । यो सुनेर म बेस्सरी हासें ।
आई.टी. : त्यसपछि उनले के भने ?
स्टोर्मी : उनले यसलाई राम्रै माने । त्यसपछि उनले भने, ‘हो, मेरी श्रीमतीले पनि ठट्टा गरेर मेरो छोराको कपाल यस्तै कोरिदिन्छिन् ।’
आई.टी. : उनले आफ्नो श्रीमतीको नाम पनि उल्लेख गरे ?
स्टोर्मी : मैले उल्लेख गरें । मैले तपार्इंकी श्रीमतीले हाम्रो यो भेटलाई कसरी लिनेछन् भनेर सोधें । उनले, ‘उसको चिन्ता नलेऊ’ भने र हतार हतार विषय बदले ।
हो, कति घिन लाग्दो है ? तर मैले ‘उनले मलाई बेश्या नठानुन’ भन्ने सोचिरहेको थिएँ । नगरबधुहरूप्रति नकारात्मक धारणा भएर होइन तर मैले कहिले पनि यो गरेकी छैन । आजको दिनसम्म मैले यो किन गरेँ थाहा छैन । साच्चै नै भनेको मलाई थाहा छैन ।
आई.टी. : श्रीमतीको बारेमा ट्रम्पले यत्ति मात्र कुरा गरे ?
स्टोर्मी : हो, हुन त धेरै अगाडिको कुरा भएकाले हामीबीच भएको संवादको शृङ्खला ठ्याक्कै सम्झन नसकेको हुन सक्छु, त्यसपछि उनले ‘तिमी निक्कै चलाख छौ । तिमी मूर्ख जस्तो लाग्दैनौं ।’ भने । मेलै धन्यवाद भन्दै उनले के भन्न खोजेको सोधें । उनले भने ‘तिमी मेरो सो(अमेरिकी च्यानल एन.बी.सी.बाट आउने ‘रियालीटी सो’ द अप्रेन्टिस) कार्यक्रममा आउनुपर्छ ।’ मैले भने ‘साँच्चै, तर मलाई त्यो सम्भव छ जस्तो लाग्दैन ।’ भने । त्यसपछि उनले भने “होइन यो तिम्रा लागि निक्कै राम्रो हुन्छ । मानिसहरूले तिमीलाई कैलो कपाल भएको ठूलो वक्षस्थलवाली मूर्ख सोच्छन् । तिमी यसका लागि ठिक्क हुन्छौ, किनकि तिमी यति ‘स्मार्ट’ व्यावसायिक छौ । तिमी लेख्छौ, निर्देशन गर्छौ र निर्माण पनि गर्छौ र निश्चय नै तिमी ‘हट’ र सुन्दर छौ ।’ मैले ‘यो कहिले हुँदैन । एन.बी.सी.ले कहिले पनि आफ्नो टिभी सोमा एक पोर्नस्टारलाई सहभागी गराउन दिँदैन ।’ त्यसपछि उनले आफूले त्यो गराउन सक्ने बताए । मैले त्यसो भए त्यो सम्भव बनाउन चुनौती दिएँ । उनले यसलाई हामी दुवै मिलेर सम्भव गराउनुपर्ने भनेँ । उनले त्यही भनेर एक वर्षसम्म मलाई आशमा झुलाइरहे । उनले भने, ‘हामी दुवै गएर तिम्रो सहभागिताको विषयमा छलफल गनुपर्छ भने । उनी गम्भीर थिए । सायद उनको दिमागमा यो कुरा आउँदा यो राम्रो हुनेछ भन्ने लागेको थियो होला र त्यो हुन पनि सक्थ्यो । निश्चय नै यो सनसनीपूर्ण हुने थियो । उनले मलाई सोधेको सोधै गरिरहे । उनले ‘के तिमी यो गर्छौ ?’ भनेर सोधे । मैले ‘तिमीलाई बताइदिऊँ कि म यो बारेमा सोचेर मेरो ऊर्जा नष्ट गर्दिनँ तर यदि तिमीमा यो गराउने सामर्थ छ भने म गर्नेछु” भनेँ ।
आई.टी. : यो सबै त्यही डिनरको क्रममा भयो ?
स्टोर्मी : अँ, डिनरपछि । त्यो हाम्रो संवादको सबैभन्दा लामो विषय भएको थियो ।
आइ. टी. : यो उनको विचार थियो ?
स्टोर्मी : हो, १००% । मैले त यो बारे पहिले कहिले पनि सोचेको थिइनँ । साँचो भन्ने हो भने मैले कहिले पनि त्यो कार्यक्रम हेरेकी पनि थिइनँ र आजका दिनसम्म पनि मैले त्यो कार्यक्रम हेरेको छैन । म धेरै यात्रामा हिड्नुपर्छ त्यसैले मसँग टिभी हेर्ने समय नै हुन्न ।
त्यसपछि म बाथरुम गएँ जुन बेडरुममै जोडिएको थियो । त्यो निक्कै ठूलो कोठा थियो । म अहिले पनि त्यो कोठालाई राम्रोसँग बयान गर्न सक्छु । जब म बाथरुम बाहिर निक्लँे उनले मलाई आफू नजिक आउन भनँे । मलाई ‘ल अब सुरु भयो’ जस्तो भयो । हामीले ‘किस’ गर्न थाल्यौँ । खासमा मैले यो किन गरेँ भनेर थाहा छैन तर जब हामी सम्भोगरत थियौँ, मेरो मनमा ‘भगवान यसका लागि यिनले शुल्क नतिरून्’ भन्ने लागेको थियो । तर लगतै ‘तर पैसा तिरे भने त निक्कै बढी तिर्छन् होला’ सोच आएको सम्झना छ ।
आई.टी. : यौन सम्पर्कको समय तपाईं यो सोचिरहनुभएको थियो ?
स्टोर्मी : हो, कति घिन लाग्दो है ? तर मैले ‘उनले मलाई बेश्या नठानुन’ भन्ने सोचिरहेको थिएँ । नगरबधुहरूप्रति नकारात्मक धारणा भएर होइन तर मैले कहिले पनि यो गरेकी छैन । आजको दिनसम्म मैले यो किन गरेँ थाहा छैन । साच्चै नै भनेको मलाई थाहा छैन ।
आई.टी. : के तपाईं उनीप्रति आकर्षित हुनुहुन्थ्यो ?
स्टोर्मी : के तपाईं हुनुहुनेछ ? म खासमा रोमाञ्चित भइरहेकी थिएँ । निश्चयनै म उत्तेजित थिएँ । हामीबीचमा निक्कै हसिँमजाक भएको थियो । घण्टौं संवाद भएको थियो । संवादमा उनी निक्कै राम्रो र बौद्धिक थिए ।
आई.टी. : जे भयो त्यसमा तपाईंहरूबीच भएको संवादको भूमिका थियो जस्तो लाग्छ ?
स्टोर्मी : हो ।
आई.टी. : बाथरुममा जाँदा बाहिर निस्केपछि त्यस्तो अवस्थासँग साक्षात्कार होला भन्ने लागेको थियो ?
स्टोर्मी : उनी खाटमा हुने कुरा थिएन तर जे भए पनि हामीबीचको सम्भोग उल्लेखनिय थिएन । उनले मलाई चेनले बाध्ने जस्तो केही गरेनन् । यो एक आसनमा भएको थियो । कुनै समय पर्यो भने म उनको ‘साधन’लाई राम्ररी बयान गर्न सक्छु । त्यसपछि उनी निक्कै सन्तुष्ट देखिन्थे । उनले ‘तिमीलाई पछि पनि भेट्न चाहन्छु, कहिले भेट्न सक्छु ?’ सोधे ।
त्यो एक आसनमा गरिएको यौन सम्पर्क थियो । त्यो उमेरको मानिसबाट बढी आस पनि हुन्न । तर त्यति नराम्रो पनि थिएन । मलाई गलत नबुझ्नु होला ।
स्टोर्मी : त्यसपछि एउटा रमाइलो घटना भयो । उनीसँग मेरो एउटा डिभिडी थियो । उनले त्यसमा मेरो हस्ताक्षर मागे र मैले गरिदिएँ ।
आई.टी. : उनले त्यसो गरे ?
स्टोर्मी : हो, मलाई थाहा छैन उनले हामी त्यहाँ रहँदा कसैलाई लिन पठाएका थिए कि । होइन होइन सम्भवत उनले त्यो ‘गिफ्ट रुम’मा लिएका थिए । सम्भवत यो उनको गिफ्ट झोलामा थियो । हो मैले सम्झेँ र मैले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको सम्झना छ ।
आई.टी. : यो पहिले भयो कि पछि ?
स्टोर्मी : पछि, हामी अझै बेडरुममा थियौं । हामीले केही बेर गफ गर्यौं । उनले निरन्तर ‘म तिमीलाई फोन गर्छु । म तिमीलाई पुनः भेट्न चाहन्छु । तिमी अद्भुद छौ । हामी मिलेर तिमीलाई कार्यक्रममा ल्याउनुपर्छ ।’ भनिरहे । त्यसपछि म निस्कँे । अर्को रात पुनः उनलाई एक पार्टीमा भेटेँ । पार्टी म बसेको होटेलमा भएको थियो । उनी बेन रोइथलिस्बर्गरसँग थिए । म त्यहाँ पुग्दा उनी पहिले नै बेनसँग थिए । उनले आफ्नो अङ्गरक्षक किथलाई मलाई फोन गर्न लगाएँ । फोनमा म आउँछु कि आउँदिन सोधिएको थियो । त्यहाँ पुगेर मैले किथलाई फोन गरेँ । किथले आफूहरू बसेको ठाउँमा लिएर गए । म त्यहाँ पुग्दा उनी बेनसँग बसिरहेका थिए, सायद निक्कै पहिलेदेखि गफिरहेका झैं देखिन्थे । त्यहाँ अरू थप एक दुई जना थिए । त्यति चर्चित होइनन् । बेनले त्यो वर्ष ‘सुपर बोल’ जितेका थिए । डोनाल्डले आफूलाई बेनसँग छुट्टिन अनुमति मागे । उनलाई निस्कनुपर्ने भयो । निस्कँदा उनले बेनलाई मेरो ख्याल गर्न भने । म त्यहाँ त्यस्तै पन्ध्र बीस मिनेट बसेँ । डोनाल्ड ट्रम्पले भनेकाले बेनले मलाई कोठासम्म छाडेका थिए ।
आई.टी. : तपाईंहरूले यौन सम्बन्ध भएपछि उनले तपाईंलाई ‘कसैलाई नभन्नु’ वा यस्तै केही भनेका थिए ?
स्टोर्मी : थिएनन् । यसबारे उनमा कुनै चिन्ता थिएन । उनी एक हिसाबले रुखो भए । मलाई भनेकहिलेकाहीँ ‘मैले गलत काम गरेँ कि’ भन्ने लाग्थ्यो । फेरि मैले मान्छेहरूलाई भन्दै पनि हिँडिनँ । कसैलाई पनि थाहा भएन ।
स्टोर्मी : तपार्इंहरूले अस्थायी साधन प्रयोग गर्नु भएको थियो ?
स्टोर्मी : थिएन ।
आई.टी. : यसमा तपार्इंहरूबीचमा सहमती भएको थियो कि आबेगमा होस् भएन ?
स्टोर्मी : एक हिसाबमा आवेगमा भयो र यस सम्बन्धमा म निक्कै तनावमा थिएँ, किनकि म निक्कै ख्याल पुर्याउने मान्छे हुँ । मैले काम गर्ने कम्पनीहरू कन्डमका मात्र छन् । तर हामीले प्रयोग नगर्नुको कारण याद भएसम्म मलाई ल्याटेक्स कन्डमको एलर्जी छ । फेरि त्यहाँ कन्डम बोकेर पनि गएकी थिइनँ । मलाई के थाहा छ भने ९९% पुरुषहरू ‘ल्याटेक्सविहीन’ कन्डम बोक्दैनन् । त्यसैले म आफै बाकप्याकमा कन्डम बोकेर हिँड्छु तर त्यो दिन म डिनरका लागि मात्र सोचेर सानो ककटेल झोला बोकेर गएको थिएँ ।
आई.टी. : यौन सम्पर्क रोमान्टिक थियो कि ?
स्टोर्मी : यो एकदम सामान्य खालको यियो । यो कुनै ‘म तिमीलाई एकदमै माया गर्छु ।’ खालको थिएन । उनी कुनै ‘फ्याबियो’ पनि थिएनन् । उनले पनि पोर्नमा जस्तो गर्न चाहिरहेका थिएनन् ।
आई.टी. : यौन सम्पर्कको बेला उनले केही भने ?
स्टोर्मी : त्यस्तो असामान्य केही भनेनन् । ‘ओ, निक्कै आनन्द आइरहेछ । ओ !’ खालको । त्यो एक आसनमा गरिएको यौन सम्पर्क थियो । त्यो उमेरको मानिसबाट बढी आस पनि हुन्न । तर त्यति नराम्रो पनि थिएन । मलाई गलत नबुझ्नु होला ।
आइ.टी : अर्को रात बेनले तपाईं कोठामा छाडिदिए । त्यसपछि… ।
स्टोर्मी : त्यसको अर्को दिन म होटेलबाट हिँडेँ । केही आसा गरिनँ । निश्चय नै उनले त्यसपछि पनि फोन गरे । उनले सधैं मलाई ‘ब्लक्ड नम्बर’बाट फोन गर्थे । उनलाई फोन गर्नका लागि उनले अङ्गरक्षक किथको नम्बर दिएका थिए । उनले आफ्नो अफिसकी सेक्रेटरी रोनाको नम्बर पनि दिएका थिए । त्यसबाट सिधै उनको अफिसमा फोन गर्न मिल्थ्यो । मैले फोन गर्दा अरू फोनमा व्यस्त भए वा त्यहाँ नभए पनि उनी दश मिनेट भित्र फोन फर्काउँथे । मलाई लाग्छ मैले फोन गरेको भनेर रोनाले उनलाई जानकारी गराउथिन् र त्यसपछि उनी मलाई फोन फर्काउँथे । उनले गर्ने फोन सधैँ ‘ब्लक्ड नम्बर’ हुन्थ्यो । उनी आफै भने मलाई प्रत्येक १० दिनमा फोन गर्थे । उनी सधैं मलाई ‘हनिबन्च’ भनेर सम्बोधन गर्थे । उनी फोन गर्दा ‘के छ हनिबन्च’ भन्थे । संवाद सधैँ उनी सुरु गर्थे । त्यसमा सधैँ मलाई फोन गर्ने बाहान हुन्थ्यो । जस्तो उनी फोन गर्ना साथ ‘भर्खर मैले तिम्रोबारे फलानो फलानोमा पढेँ वा तिम्रोबारेमा म्यागजिनमा समाचार आएको छ । मैले आज टिभी खोल्दा अनुमान गर्छौ टिभीमा को थियो ?’ कुरा उनले मलाई कतै पढेको वा देखेकोबाट सुरु हुन्थ्यो । त्यो समय म एकदमै व्यस्त थिए । त्यो समय मेरो बच्चा भएका कारणले म बिदामा थिएँ तर त्यो समय जताततै देखिन्थे । यिनै बाहना देखाएर उनी मलाई फोन गर्थे । ‘हे तिमी फलानो फलानोमा छौ, तिमीलाई थाहा छ ? हामी भेटेर मेरो कार्यक्रममा तिम्रो सहभागिताबारे कुरा गर्नुपर्छ ।’
आई.टी. : के उनले यसको वाचा गरेको थिए ?
स्टोर्मी : हो, निश्चित रूपमा । उनले मलाई उनीसँग कोही एकजनालाई सीधै प्रवेश गराउने ‘वाइल्ड कार्ड’ रहेको बताउँथे ।
आई.टी. : र उनले त्यो तपाईं हुनुहुनेछ भनेका थिए ?
स्टोर्मी : हो । १००% उनले मलाई वाचा गरेका थिए । त्यसपछि मैले उनलाई म ट्याम्पामा सर्न लागेको बताएँ । उनले त्यहाँ मलाई उनले बनाउँदै गरेको ट्रम्प टावरमा एउटा फ्याट दिने बताए । मेरो जानकारी भएसम्म त्यो भवन पछि पूरा भएन । म त्यहाँबाट फर्केको दुई वर्षपछि बन्यो कि । मलाई उनले भन्दा नै फ्याट दिने कुरामा विश्वास लागेको थिएन । मैले जहिले फोन गर्दा पनि उनी फकाउँर्थे र रमाइलो त्यो बेलाका मेरा सहकर्मी र ब्वाइफ्रेन्ड (जो सँग पछि विवाह भएर हाल डिभोर्स भइसक्यो) लाई म ट्रम्पसँगको संवादलाई लाउडस्पिकरमा सुनाउँथे । म साँचो भन्दै छु ।
आई.टी. : डोनाल्ट ट्रम्ससँग यौन सम्पर्क हुँदा तपाईंको ब्वाइफ्रेन्ड थियो ?
आई.टी. : के उनलाई यसको जानकारी थियो ?
स्टोर्मी : उनलाई सम्बन्धको सम्पूर्ण विस्तार त थाहा थिएन तर बाँकी सबै थाहा थियो । उनी मलाई धेरै फोन गर्थे । एक पटक लस एन्जेल्समा आएको बेला उनले फोन गरेर भेट्न बोलाए । तर उनी लस एन्जल्समा आउँदा म बाहिर थिएँ । म धेरै घुम्छु । उनले म न्युयोर्कमा आउँदा उनलाई अफिसमा भेट्न आउन भने । एक पटक म र मेरो सहायक गयौं । हामी सीधै उनको अफिसम पुग्यौं । उनले हामीलाई देखे । म्यानहटन स्थित उनको निजी अफिसको सबैभन्दा उच्च टावरमा म थिएँ ।
आई.टी. : यो कहिले को कुरा हो ?
स्टोर्मी : यो सो वर्षको जाडो महिना थियो । सायद डिसेम्बर वा जनवरी थियो । त्यो बेला न्युयोर्कमा आउँदा मैले गालाघरमा नाचेको पुरानो प्रेस रिलिज पाउनुहुनेछ । म ट्रम्प भोड्का सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि गएँ । त्यो समय मेरो रेड कार्पेटमा खिचिएको तस्बीरहरू लेस डिउक्समा छापिएको छ ।
आई.टी. : के उनले व्यक्तिगत रूपमा तपार्इंलाई निमन्त्रणा दिएका थिए ?
स्टोर्मी : हो, मलाई लाग्छ त्यो जनवरी थियो । म त्यहाँ १५–२० मिनेट मात्र बसेँ । मलाई विमान समात्नु थियो । तर त्यो अवधिमा मैले रेड कार्पेटमा फोटो खिचाएँ । भित्र जाना साथ उनले मलाई सबैको अगाडि अँगालो हालेर चुमे । फेरि पनि किथले मलाई भी.आई.पी. क्षेत्रमा लगे । उनले मलाई केही बढी बस्न सकिन्छ कि भनेर सोधे । मैले नसक्ने उत्तर दिएँ । उनले मलाई मिस यू.एस.ए. (यो क्रार्यक्रमलाई डोनाल्ड ट्रम्पले आयोजना गर्छन्) को निमन्त्रणा दिए । उनले मलाई कार्यक्रमको टिकट दिए । त्यसपछि म निस्किएँ । डोनाल्डसँग गफ गर्न त्यहाँ धेरै मान्छे झुम्मिरहेका थिए । म त्यो भीडमा एक थप हुन चाहँदिनँ थिएँ । मैले टाढैबाट बिदाइको हात हल्लाएँ र टिकटका लागि धन्यवादको सङ्केत गरेँ ।
उनी सधैँ त्यस्तै नम्बरबाट फोन गर्थे, ‘ब्लक्ड नम्बर’बाट । फोनमा “हनिबन्च, के छ हालखबर ?’ भनेर सोध्थे । म ‘ओहो डोनाल्ड ट्रम्प !’ भन्थें । उनी ‘म तिमी के गर्दै छौ भन्ने जान्न चाहन्थेँ ।’ भन्थे । मलाई थाहा छैन उनी फोन चलाउँदै गर्दा मेरो नाम आएर मलाई सम्झन्थे कि ।
आई.टी. : त्यो कार्यक्रम हुनुअघि पनि उनले फोन गरे ?
स्टोर्मी : हो । कम्तीमा महिनाको तीन पटक ।
आई.टी. : के ती फोनमा पुन यौनसम्पर्क गर्ने कुरा उल्लेख हुन्थ्यो ?
स्टोर्मी : हो । ‘तिमीसँग कहिले भेट हुन्छ, मलाई भेट्न मन लागिसक्यो ।” भन्थे तर “आउ ग…।” भन्दैनथे ।
आई.टी. : के यो इसारा थियो ?
स्टोर्मीः हो, अब तपाईं आफै भन्नुस कुनै पुरुषले फोन गरेर ‘तिमीसगँ फेरि कहिले भेट हुन्छ, तिमीसँगको पछिल्लो पटकको भेट निक्कै अद्भूत रह्यो । फेरि कहिले भेटहुन्छ’ भन्छ भने त्यसको अर्थ के हुन्छ ?
आई.टी. : उनीसँगको कुनै पनि भेटमा उनकी श्रीमती सहभागी थिइन ?
स्टोर्मी : मैले कहिले पनि उनलाई देखिनँ । खासमा व्यक्तिगत रूपमा मैले कहिले पनि उनलाई भेटेको छैन । त्यसपछि उनीसँग मेरो अर्को भेट जुलाईको अन्त्यतिर भयो । उनले मलाई फोन गरे र बेवरर्ली हिल होटलमा भेट्न सकिन्छ कि भनेर सोधे र म गएँ । मेरो ब्वाइफ्रेन्डले मलाई त्यहाँसम्म गाडीमा पुर्याए । अङ्गरक्षक किथले लिनलाई बाहिरसम्म आए र भित्र लगे । उनको त्यहाँ निजी ‘बङ्ला’ थियो । त्यहाँ म पहिले गएको थिइनँ र त्यसपछि पनि त्यहाँ गएको छैन । हामीले त्यहाँ खाना खायौं र हामीले पुनः एक पटक डिनर खायौँ । यो पटक हामीले माछा खाएका थियौं । यो पटक पनि रक्सी खाएनौं । त्यो रातको अनौठो कुरा भनेको हामीले डिनर खाइरहेको टेबलबाट टिभी देखिन्थ्यो । टिभीमा उनी ‘सार्क विक’ हेरिरहेका थिए । उनी सार्कसँग धेरै डराउँथे । उनले गफका क्रममा ‘मैले धेरै च्यारिटीहरूमा पैसा दान गरेको छु तर म कहिले पनि सार्कलाई सहयोग गर्ने च्यारिटीमा पैसा दिदिनँ भने । मलाई संसारको सबै सार्कहरू मरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।’
आई.टी. : त्यसो भए ‘बङ्लो’मा तपाईं र उनी मात्र थिए ?
स्टोर्मी : हो, तर यो कति अनौठो हैन ? कति अजीव । त्यसपछि हामीले डिनर सकायौँ र टिभी राम्रोसँग देखिने गरी सोफामा बस्यौं । त्यसपछि उनले आफ्नो कार्यक्रममा मेरो प्रवेशवारेमा गफ सुरु गरँे । उनले आफ्नो कार्यक्रममा मलाई समावेश गर्ने कुरामा एक जनाले विरोध गरेर भिटो प्रयोग गरेको कुरा बताएँ । मैले ‘मैले भनेको थिएँ तिम्ले सक्दैनौँ ।’ भनेर भनेँ । म निक्कै रिसाएको थिएँ । उनले मेरो खुट्टा मुसार्दै भने ‘तिमीलाई थाहा छ, तिमी कति सुन्दर छौ भनेर । मलाई तिम्रो नाक मन पर्छ, यो सानो गन्टे मूला जस्तै छ ।’ मैले ‘तिम्ले गान्टे मूला भन्यौ ? कस्तो नचाहिने तुलना ?’ मैले उनलाई यसमा रिसाएको झैं गरेँ । उनले ‘होइन, होइन, होइन, होइन ! यो निक्कै राम्रो छ । यो नाक निक्कै ‘स्मार्ट’ देखिन्छ, चीलको जस्तो ।” मलाई रिस मरेको थिएन । म निक्कै रुखो रूपमा प्रस्तुत भइरहेकी थिएँ । उनले मेरो काधमा रहेको कपाल मिलाउँदै मेरो घाँटीमा चुमे । उनले मलाई ‘के तिमी बस्छौ ?’ साधें । मैले ‘होइन, मलाई जानु छ ।’ भनेँ र निस्किएँ । अङ्गरक्षक किथले मलाई कारसम्म पुर्याए । म त्यहाँ सम्भवत साढे दुई घण्टासम्म रहेँ । त्यो भेट पछि उनले मलाई कम फोन गर्न लागे । त्यसको केहीपछि उनको कार्यक्रममा जेन्ना जोनसनले प्रवेश पाएको जानकारी दिन फोन गरेका थिए । मैले कुनै भावना नभएझै प्रस्तुत भएँ ।
आई.टी. : विभर्ले हिलभन्दा अघि भएका भेटहरूमा के उनले यौन सम्पर्क गर्ने वा चुम्ने प्रयास गरेका थिएँ ?
स्टोर्मीः थिएनन् । उनले ‘हेल्लो के छ ?’ भनेझैं चुम्थेँ, जस्तो ट्रम्पको भोड्का सार्वजनिक कार्यक्रममा गरेका थिएँ । उनी ‘के जानै पर्छ र ? केही समय बस्न मिल्दैन ?’ सोध्थे ।
आई.टी. : उनी बस्न आग्रह गर्थे तर तपाईं निस्कनु हुन्थ्यो ?
स्टोर्मी : हो, र त्यसपछि उनले मलाई थोरै पटक मात्र फोन गरे र फोनमा उनी ‘यदि तिमीलाई केही चाहेमा मलाई बताऊ ।’ भन्थे । उनी मलाई कुनै समय गल्फ खेल्नुपर्यो भने उनलाई सम्झनु भन्थे । म गल्फ खेल्ने कसैलाई नचिन्ने भएकाले र आफै पनि गल्फ नखेल्ने भएकाले कहिले त्यो माग गरिनँ ।
आई.टी. : उनले अरू पनि उपहार पठाएका थिए कि ?
स्टोर्मी : अहँ, र मैले पनि कहिल्यै मागिनँ । जस्तो मैले भने उनी सधैँ ‘ब्लक्ड नम्बर’बाट फोन गर्थे र पछिल्लो डेढ वर्षमा उनले फोन गरे कि गरेनन् थाहा भएन । मैले मेरो छोरी जन्मेपछि अपरिचित नम्बरबाट आएका फोन उठाउन छाडेकी थिएँ । मेरा प्रशंसकहरूलाई मेरो बच्चा भएको थाहा थिएन । मैले लस एन्जल्स छाडेर भेगासमा बस्न थालेकी थिएँ । एक हिसाबले म भूमिगत भएकी थिएँ । मैले ‘ब्लक्ड नम्बर’बाट आएको फोन उठाउन छाडिसकेको थिएँ ।
आई.टी. : यो कहिलेको कुरा हो ?
स्टोर्मी : लगभग डेढ वर्षबाट ।
आई.टी. : के त्यो तपाईंको अन्तिम अन्तत्र्रिmया थियो ?
आई.टी. : त्यसो भए अन्तिम संवाद चाहिँ कुन थियो ? जेन्ना जेमसनबारे भएको गफ ?
स्टोर्मी : होइन, त्यसपछि पनि मेरो कुरा भएको छ । तर गफ ‘हे, के छ हालखबर ?’ भन्ने हुन्थ्यो । सर्भेक्षणकर्ता र कर सङ्कलकको फोनजस्तो नम्बरबाट आएको फोन उठाउन डरमर्दो हुन्छ । उनी सधैँ त्यस्तै नम्बरबाट फोन गर्थे, ‘ब्लक्ड नम्बर’बाट । फोनमा “हनिबन्च, के छ हालखबर ?’ भनेर सोध्थे । म ‘ओहो डोनाल्ड ट्रम्प !’ भन्थें । उनी ‘म तिमी के गर्दै छौ भन्ने जान्न चाहन्थेँ ।’ भन्थे । मलाई थाहा छैन उनी फोन चलाउँदै गर्दा मेरो नाम आएर मलाई सम्झन्थे कि ।
आई.टी. : त्यो कहिले भएको थियो ?
स्टोर्मी : ठ्याक्कै समय त थाहा भएन । लगभग डेढ वर्ष अगाडि हो । त्यो समय सिनेटले मसँग सबाल जवाफ गरेको बेला थियो । उनले फोन गरेर ‘हे, मैले तिम्लाई सी.एन.एन. हो वा फक्स हो या यस्तै केमा देखेको थिएँ । तिम्लाई निक्कै राम्रो देखिएको थियो । तिम्ले तिनलाई क्या जवाफ दियौ, मलाई मन पर्यो ।’ भने ।
पाईंलाई एडल्ट उद्योगमा काम गर्नेसँग गोप्य रूपमा सङ्गत गर्दा चाहिँ ठीक छ तर सार्वजनिक रूपमा भने यो उद्योग र यसमा काम गर्नेलाई अपमान गर्नुहुन्छ भने रिस उठ्दैन ? म रेकर्डमा नभएको कुरा गरिरहेको छु, त्यसैले म के कुरा गरिरहेको छु भन्ने तपाईं अलमलमा पर्नुहुन्छ होला ।
आई.टी. : र तपाईंहरूको अन्तिम पटक भेट चाहिँ बेबर्ली हिलको भेट थियो ?
आई.टी. : तपाईंलाई यो सबैमा कस्तो लाग्छ–आफ्नो बाचा पूरा नगरेकोमा ? तपाईंको धारणा के रहेको छ ?
स्टोर्मी : मलाई थाहा छैन । जेसुकै भए पनि मलाई कुनै रिस छैन ।
आई.टी. : तपाईंलाई ट्रम्पलाई विश्वास गरेर मूर्ख बने जस्तो लाग्छ ?
स्टोर्मी : लाग्दैन । मैले परिचितहरूलाई उनको प्रस्तावबारे भन्दै हिँडेको पनि थिइनँ । ‘थाहा पायौं म डोनाल्ड ट्रम्पको सोमा सहभागी जनाउँदै छु ।’ खासमा मैले उनको कुरामा पुरै विश्वास गरेकी थिइन । मैले त उनलाई त्यो सम्भब बनाउन चुनौती दिएको थिएँ । उनले १००% हुन्छ भने पनि मैले ५०–५० आस गरेको थिएँ । उनको कुरामा मात्र होइन म त्यस्तो ठूला कुराहरूमा कहिलै पनि पूरा आस गर्दिनँ ।
आई.टी. : तपाईंहरू बीच भएको कुरा त्यो बेलामा अरूलाई भन्नुभएको थियो ?
स्टोर्मी : एक दुई जना मानिसहरूलाई भनेकी थिएँ । मेरा सहायक, व्बाइफ्रेन्ड, मेरो साथी र्यान्डीलाई मैले काम गर्ने कम्पनीको प्रमुखलाई भनेकी थिएँ । तिनीहरू मेरो सम्भावनालाई लिएर निक्कै उत्साहित थिए ।
आई.टी. : तपाईंलाई उनको वा उनको श्रीमतीको लागि केही सन्देश छ ?
स्टोर्मी : मलाई थाहा छैन । अरूको कुभलो गर्नेले आफैले पनि त्यस्तो भोग्नुपर्छ ।
आई.टी. : उनी विवाहित थिए भन्ने तपाईं थाहा थियो । तपाईंसँग लागेर आफ्नी श्रीमतीलाई धोका दिइरहेको मानिससँग सम्बन्धमा रहँदा कस्तो लाग्यो ?
स्टोर्मी : त्यो समयमा त त्यस्तो केही सोचेकी थिइनँ तर अहिले मेरा बच्चा उनको त्यो बेलाको बच्चाको उमेरको भइसकेपछि ‘ओहो कस्तो ख…”
आई.टी. : तपाईंलाई नराम्रो लाग्छ ? यदि उनकी श्रीमतीसँग कुनै समय भेट भयो भने के भन्नु हुन्छ ?
स्टोर्मी : हो, मलाई नराम्रो लागिरहेको छ । त्यो समय भने मलाई त्यस्तो लागेको थिएन ।
आई.टी. : अहिले यसबारेमा किन खुल्दै हुनुहुन्छ ?
स्टोर्मी : म यसलाई बाहिर ल्याउनेवाला थिइनँ । मेरो एक जना साथीले फोन गरेर भनिन्– ‘हे, म फलानोसँग कुरा गर्दै थिएँ र उसले तिम्रो र …सम्बन्धको उल्लेख गर्यो, के यो साँचो हो ?’ सोधिन् । मैले ‘हो, एक वर्ष जति म उनीसँग निरन्तर सम्पर्कमा थिएँ ।’ भने । त्यसपछि उनले भनिन्– ‘तिमीलाई थाहा छ, उसको बारे निक्कै तल्लो स्तरको धारणा छ ।’ सुनाइन । त्यो निक्कै अपमानजनक थियो र त्यसले मलाई निक्कै क्रूद्ध बनायो ।
आई.टी. : यसलाई विस्तारमा भनिदिनुस् न ।
स्टोर्मी : तपाईंलाई एडल्ट उद्योगमा काम गर्नेसँग गोप्य रूपमा सङ्गत गर्दा चाहिँ ठीक छ तर सार्वजनिक रूपमा भने यो उद्योग र यसमा काम गर्नेलाई अपमान गर्नुहुन्छ भने रिस उठ्दैन ? म रेकर्डमा नभएको कुरा गरिरहेको छु, त्यसैले म के कुरा गरिरहेको छु भन्ने तपाईं अलमलमा पर्नुहुन्छ होला । एक युवती (जो पोर्न स्टार होइनन् र त्यति परिचित पनि छैनन्) ले उनीसँग हाम्रो सम्बन्धबारे केही भनिछन् । उनले ‘होइन त्यो सम्बन्ध भएको छैन’ मात्र होइन उनी त त्यस्तो मान्छेसँग सङ्गत गर्ने मान्छे हुँ भनेर तथानाम भनेछन् तर हेर्नस् म पोज दिनेभन्दा बढी गर्नसक्ने मान्छे हो । त्यसपछि उनले पूरा समय मसँग ढाँटिरहेका रहेछन् भन्ने होस आयो । मलाई त उनको सोमा लिइन्छ भन्ने पूरा आस पनि थिएन । मलाई मेरो सम्भावना ५०–५० लागेको थियो । तर अहिले आएर त्यो सबै झुट रहेछ भन्ने लाग्न थालेको छ ।
आई.टी. : तपाईंलाई प्रभावित बनाएर तपाईंसँग यौन सम्पर्क राख्नका लागि ?
स्टार्मीः हो र मलाई लाग्छ झुटले काम गर्यो ।
आई.टी. : तपार्ईंलाई यसमा केही थप्न चाहनुहुन्छ ?
स्टोर्मी : म उनकी श्रीमती हुन्थें र मैले आफ्नो श्रीमानले सयौं केटीलाई भोगेको थाहा पाएको भए म त्यसमा भन्दा पनि ऊ डिनरमा गएको र त्यस्तो सम्बन्ध लामो समय चालु राखेकोमा बढी क्रोधित हुन्थे ।
आई.टी. : यो ‘ओन–नाइट स्ट्यान्ड’भन्दा दीर्घ सम्बन्ध भएकोमा ?
स्टोर्मी : ठीक भन्नु भयो ।
आई.टी. : के उनले आफ्नी श्रीमतीको नाम कहिले उल्लेख गरेनन् ?
स्टोर्मी : अहँ ।
आई.टी. : र उनले आफ्नी श्रीमती यो सम्बन्धलाई स्वीर्काछिन् भन्दा पनि चिन्ता गर्नुपर्दैन भने ?
स्टोर्मीः हो । बरु उनले आफ्नी छोरी (इभान्का)को बारेमा निक्कै पटक गर्वका साथ कुरा गरेँ । उनी छोरीलाई लिएर निक्कै गर्व महसुस गर्थे, जुन एक हिसाबले राम्रो हो । उनले एक पटक मलाई उनको छोरीजस्तै चलाख र सुन्दर भनेका थिए । सायद उनले प्रशंसै गरेको हुनुपर्छ । तर परिवारको सन्दर्भमा उनले छोरीको मात्र कुरा गरे । उनी छोरीलाई लिएर भने निक्कै गर्व महसुस गर्थे र त्यो हुनु पनि पर्छ ।
आई.टी. : उनले अरूसँग पनि यौन सम्पर्क गरेको कुरा गर्थे ?
आई.टी. : तपाईंको करिअरको के छ आजकल ?
स्टार्मी : निक्कै राम्रो भइरहेको छ । मेरो भर्खर एक बच्चा भयो । गर्भवतीको अवधिभर मैले लेखन र निर्देशनमा मात्र ध्यान दिएँ । अघिल्लो वर्ष मैले निर्देशन मात्र गरेँ । अहिले पनि ‘विक्ड’ निर्देशन गरिरहेको छु । तिनसँग मेरो अनगन्ती सम्भौता रहेको छ । यो निक्कै राम्रो भइरहेको छ । हामीले भर्खरै ‘विक्ड प्यासन’ भन्ने नयाँ ब्यानर सुरु गरेका छौं । म त्यसको निर्देशक जस्तो हुँ । अर्को महिनाबाट म सुटिङमा गइरहेको छु । सबै कुरा राम्रै चलिरहेको छ । मैले दुई वर्षमा गर्ने फिल्म एकै वर्षमा गरेँ, ता कि मैले काम गर्ने कम्पनीले म नहँुदा पनि फिल्म रिजिल गरिरहन पाउनेछ र बीचमा ग्याप छ जस्तो पनि लाग्नेछैन ।
आई.टी. : अहिले पनि तपाईंलाई अवसर आयो भने तपार्इं त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ ?
स्टोर्मी : मलाई सोच्नुपर्छ । अब मेरी एउटी छोरी छे । म अब न्युयोर्कमा जान चाहन्छु कि चाहन्न पनि सोच्नु पर्छ । तर अन्त्यमा सायद गर्छु होला । यसलाई कसरी समय मिलाउने भने सोच्नुपर्छ ।
आई.टी. : डोनाल्ड ट्रम्पसँग कतै भेट भयो वा उनले तपाईंलाई पछ्याए भने के तपाईं पुन उनीसँग यौन सम्पर्क राख्नुहुन्छ ?
स्टोर्मीः अहँ ।
आई.टी. : किन ?
स्टोर्मी : किनकि म अहिले कोही अरूसँग छु, जोसँग म विशेष महसुस गर्छु ।
अनुवाद : श्रवण उप्रेती
चर्चित गायिका पूर्णकला बिसीको आवाजमा आयो दुनियाँ रुवाउने गीत “तिमी हिड्ने बाटो” भिडियो सहित सार्वजनिक
दर्दनाक जिन्दगी ५० वर्षिया आमाको ३ वर्ष देखि छेउमै मरेका मान्छे पोल्ने ओडारमा बास
टिनको छाना क्रार्यक्रम गरिबहरूको हितमा छ विष्णुकुमार गिरी अध्यक्ष गौमुखी गाउँपालिका,प्यूठान
न्यायिक समितिमार्फत सेवाग्राहिलाई न्याय पाएको अनुभुत गराउछौंः उपाध्यक्ष बस्नेत ।
गित गाउँदै बिरामी जाँच्छु : थर्ड रनरअप अस्मिता अधिकारी
प्यूठान थुप्रै संभावना वोकेको जिल्ला होः पोख्रेल
जिप दुर्घटना हुदा दुई घाइते
प्युठानको मल्लरानी गाउपालिका वडा नं १ चुजाको दारीमपाटा नजिकै आज जिप दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा...
पहिलो पटक प्यूठानमा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण
प्यूठान , जिल्लामा समुदाय स्तरमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्यूठान नगरपालिका वडा...
नेकपा निकट युवा विद्यार्थीहरुको भेला सम्पन्न
झिमरुक गाँउपालीकामा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी(नेकपा) निकट अगुवा युवा तथा विद्यार्थी हरुको भेटघाट सम्पन्न भएको छ।...
वेवारिसे बच्चा भेटिएको भन्दै झुटो प्रचार, लिइन लाखौको सहयोग
वेवारिसे अवस्थामा श्रावण १३ गते भेटिएको भनिएको बच्चाको बारेमा केयर बालगृहकी सञ्चालिका पुष्पा अधिकारीले झुठो...
दिगो माटो व्यवस्थापनको अवधारणा
माटो पृथ्वीको सतहको त्यो खुकुलो भाग हो जुन चट्टानहरु टुक्रिएर वा खिईएर तथा जिवजन्तु र...
स्थानीयको सकृयतामा कुटि छहरा जाने बाटो जोडियो ,पर्यटक जान सहज
स्थानियद्वारा यात्रुलाई मास्क वितरण
प्युठान नगरपालिका २ का वडा सदस्य धामिकाे निधन
प्यूठान नगरपालिकाको वडाहरुमा समिक्षा, रोजगार केन्द्रित कार्यक्रम गर्न नगरवासिको सुझाव
गौमुखीमा चिकित्सक सेवाः चिकित्सक भर्नासंगै सेवाग्राही दोव्वर वढी
शिक्षकहरुका लागी अनलाईनवाटै कम्यूटर तालिम
कोरोनाले नेवारी जात्रा प्रभावित
झिमरुक मिडिया नेटवर्क द्वारा सञ्चालित Ckhabar.com का लागि
नोमराज पौडेल – 9857833751
हरिप्रसाद भण्डारी – 9857833766
Copyright © 2016-2020 CKhabar.Com | Powered By EasySoftnepal